တရုတ်နိုင်ငံက သီရိလင်္ကာနိုင်ငံအား Sinopharm ကုမ္ပဏီထုတ် ကာကွယ်ဆေး အလုံးရေ ၃၀၀,၀၀၀ လှူဒါန်း - Xinhua News Agency
ကိုလံဘို၊ ဇန်နဝါရီ ၂၈ ရက် (ဆင်ဟွာ) ဘာသာပြန် – ခေါန်ရိန်
တရုတ်နိုင်ငံက COVID-19 ကပ်ရောဂါ ပူးတွဲတိုက်ဖျက်ရန် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံအား COVID-19 ကာကွယ်ဆေးအလုံးရေ ၃၀၀,၀၀၀ လှူဒါန်းမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံက သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ အစိုးရ၏ မကြာသေးမီက တောင်းဆိုချက်အရ ယင်းသို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ကိုလံဘိုမြို့ရှိ တရုတ်နိုင်ငံ သံရုံး၏ ထုတ်ပြန်ချက်၌ ပြောကြားထားသည်။
အဆိုပါ ကာကွယ်ဆေးများကို တရုတ် အမျိုးသား ဆေးဝါးလုပ်ငန်းအုပ်စုကုမ္ပဏီလီမိတက် (Sinopharm) မှ ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး နှစ်ဘက်အနေဖြင့် လုပ်ငန်းစဉ်များပြီးနောက် ဖေဖော်ဝါရီလလယ်ပိုင်းတွင် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံသို့ လွှဲပြောင်းပေးနိုင်မည်ဟု မျှော်မှန်းထားကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်က ဆိုသည်။
Inactivated ကာကွယ်ဆေး (inactivated vaccine) ကာကွယ်ဆေးမျိုးဖြစ်သည့်အတွက် ကာကွယ်ဆေး၏ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအပိုင်းမှာ ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး သိုလှောင်ရလွယ်ကူသလို ပုံမှန် ဆေးသေတ္တာအပူချိန် ၂ မှ ၈ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဖြင့် အလွယ်တကူ သိုလှောင်ကာ သယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
လက်ရှိတွင် အမျိုးသား ဆေးဝါးကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင် (NMRA) က Sinopharm ကာကွယ်ဆေးကို စစ်ဆေးမှုများ ဆောင်ရွက်နေပြီး ခွင့်ပြုချက်များရရှိပါက အခြေခံ အရေးပေါ်အသုံးပြုနိုင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ သမ္မတ Gotabaya Rajapaksa ၏ အကြီးတန်းအကြံပေး Lalith Weeratunga က ဇန်နဝါရီ ၂၇ ရက် အစောပိုင်းက မြို့တော် ကိုလံဘို၌ သတင်းထောက်များကို ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
COLOMBO, Jan. 28 (Xinhua) — China will donate 300,000 COVID-19 vaccine doses to Sri Lanka to jointly fight the COVID-19 pandemic.
Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa’s senior advisor Lalith Weeratunga told journalists in capital Colombo earlier Wednesday that presently the National Medicines Regulatory Authority (NMRA) was conducting tests on the Sinopharm vaccine and once clearance is obtained from them, this vaccine could be used under an emergency basis. ■
ဗြိတိန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် က ပြည်ဝင်ခွင့်စီမံခန့်ခွဲမှုကို တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ပြီး COVID-19 ကပ်ရောဂါ ကို ကာကွယ်ထိန်းချုပ်သွားမည်ဟု ဆို